Ukufukula umnotho wamazwe ama-Arabhu kunganyefiswa i-USA - Bayede News
Ukufukula umnotho wamazwe ama-Arabhu kunganyefiswa i-USA
Izwe i-USA alinazo izinhlelo “zokulungisa noma ukwenza ngcono” ubudlelwano bezokuxhumana noHulumeni kaMengameli waseSyria uBashar al-Assad (osesithombeni) futhi alikhuthazi nabanye ukuthi benze njalo, kusho okhulumela uMnyango Wezwe ngoLwesithathu.
Ukuphawula lokhu kuqhamuke ngesikhathi kuphendulwa imibuzo yabezindaba yokuthi iWashington iyakhuthaza futhi iyakweseka ukuhlangana kabusha phakathi kweJordan neSyria ngemuva kokuthi iJordan ivule ngokuphelele umngcele wayo omkhulu neSyria ngoLwesithathu.
Lesi sinyathelo bekuwukufukula umnotho wamazwe odonsa kanzima nokuqinisa umfutho wezizwe zama-Arabhu zokuthi ubuyise iSyria ngemuva kokubalekelela ngesikhathi sempi yezakhamuzi.
“I-United States ngeke ilungise noma ivuselele ubudlelwano bethu bezombusazwe nombuso oholwa ngu-Assad futhi asikhuthazi abanye ukuba benze njalo, uma kubhekwa isihluku esenziwa umbuso wa-Assad kubantu baseSyria,” kusho okhulumela uMnyango Wezwe nge-imeyli. “Umbuso ka-Assad awuphindanga wabuya waba semthethweni emehlweni ethu, futhi akukho kungabaza ngokuthi i-US ibenze ubuhlobo bube buhle nohulumeni wakhe ngalesi sikhathi.”
Kwakungenye yezimvo eziqine kakhulu kuze kube manje ngeSyria kusuka ekuphathweni kukaHulumeni kaMengameli wase-USA uBiden, inqubomgomo yayo yaseSyria egxile kakhulu ekuqinisekiseni ukwehlulwa unomphela koMbuso wamaSulumane nokunikeza usizo kubantu baseSyria.
Izwe i-USA limise zonke izindlela zalo zokuxhumana neSyria kusukela ngonyaka wezi-2012.
UHulumeni owawuholwa yilowo owayenguMengameli wase-USA uDonald Trump ngenyanga kaNhlangulana onyakene odlule bafaka unswinyo olukhulu kunalo lonke olwalubhekise ku-Assad nakwimibuthano yakhe yangaphakathi ukuze kuminyanise imali kuHulumeni wakhe ngenhloso yokuyiphoqa ukuthi ibuyele ezingxoxweni nakubaxhumanisi eholwa yi-United Nations (UN) futhi kuphele impi yezwe engaphezu kweminyaka eyishumi.
Amazwe ama-Arab anqamula ubuhlobo neSyria ngesikhathi sempi yezakhamuzi, i-United Nations ethi kwabulawa abantu abangama-350 000, kanye namazwe ase-Arab ahlangene ne-United States, okubalwa iQatar, iSaudi Arabia kanye ne-United Arab Emirates asekela amaqembu aphikisayo alwa no-Assad.
I-United Arab Emirates neSyria babuyise ubudlelwano bezombusazwe ngonyaka wezi-2018. Ongqongqoshe bezangaphandle base-Egypt nabaseSyria bahlangane ngoLwesihlanu eceleni koMhlangano Kazwelonke we-UN eNew York, kulokho abezindaba base-Egypt bathi bekungumhlangano wokuqala kulelo zinga cishe iminyaka eyishumi.
Izikhulu zaseJordan, umlingani wase-USA, kanye neLebanon banxuse iWashington ukuthi yehlise unswinyo eSyria.
“Sikholelwa ukuthi ukuzinza eSyria, kanye nesifunda esikhulu, kungafinyelelwa kuphela ngenqubo yezepolitiki emele intando yabo bonke abaseSyria futhi sizibophezele ekusebenzisaneni nabalingani, bethu, kanye ne-UN ukuqinisekisa ukuthi isisombululo sezombusazwe esihlala njalo sihlala,” kusho okhulumela uMnyango Wezwe.
UHulumeni ka-Assad ubuyise iningi laseSyria ngaphansi kwesandla sawo kepha ezinye izindawo namanje azikho ngaphansi kwawo.